I-TSMT ikulungele ukuba nezikrini ze-miniLED zeMacBook Pro entsha ekulungele ukuphela kwe-2021 | Ndisuka mac
Emva kokuba iApple ikhuphe ifayile ye IP Pro entsha ngezikrini ze-miniLED kwaye mayibe yinkampani Itekhnoloji yokuKhwela phezulu eTaiwan (TSMT) kuphela komboneleli wale teknoloji, ikulungele ukwenza okufanayo kodwa yeNkqubo yeMacBook. Kuqala kwabonakala ngathi abanakuyiphumeza ngenxa yobunzima obubandakanyekayo kwaye ngenxa yezixhobo, nangona kunjalo ngoku ikulungele.
Umthengisi we-Apple TSMT ukwazile ukujongana nemiceli mngeni yezobuchwephesha yokuvelisa iziboniso ze-miniLED eziza kusetyenziswa kwiimodeli ze-14 kunye ne-16-intshi iMacBook Pro. Njengoko kuchaziwe Amaxesha eDigi, I-TSMT yayiqale yajamelana nezithintelo kwimveliso kwibhodi yesekethe kunye nezinto zokubambelela kwimiboniso encinci ye-mini yeemodeli ezizayo zeMacBook. imveliso ukuya kwi-95%.
I-TSMT ngumboneleli ngenkonzo okhethekileyo we-SMT ngokukhanyiswa kwangoko kwezibane zangasemva ze-12,9-intshi ye-IP Pro. Kulindeleke ukuba wenze okufanayo kwiimodeli ezimbini ezilandelayo zeMacBook. Ngenxa yemicimbi enee-pcbs kunye nezinto zokubambelela, amaxabiso okuhamba kwe-TSMT yokunyuka komhlaba kwizibane zangemuva ze-miniLED bezingaphakamanga ngokwaneleyo kwasekuqaleni. Emva kokutshintsha abathengisi bezinto zokubambelela, I-TSMT inyuse amaxabiso okubuyela ngaphezulu kwe-95% namhlanje.
I-14 entsha kunye ne-16-intshi iMacBook Pros ekulindeleke ukuba ifike inezinto ezintsha ezinje ngeMagSafe, ukususwa kweTouchBar, uyilo olutsha kwaye kunjalo nge-chip M1. Ngokufanelekileyo baya kuba nale teknoloji kwizikrini zabo. Bayamlinda isemester yesibini ye-2021. Ke ukuba ufuna ukuvuselela ilaptop yakho, kungcono ulinde kancinci kuba ezi MacBook Pro zintsha zibukeka zilungile.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » I-TSMT ikulungele ukuba nezikrini ze-miniLED zeMacBook Pro entsha ekulungele ukuphela kwe-2021
IMacOS Big Sur 11.3.1 ngoku iyafumaneka kwaye ilungisa isiphoso sokhuseleko